ဇွန်လ (၂၀)#စိန်အာဗန်ပွဲနေ့ (St. Alban) | Radio Veritas Asia
ဇွန်လ (၂၀)#စိန်အာဗန်ပွဲနေ့ (St. Alban)
စိန့်အာဗန်သည် ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင် ပထမဦးဆုံး ယုံကြည်ခြင်းအတွက် အသတ်ခံခဲ့ရသည့် ဓမ္မအာဇာနည် တစ်ပါးဖြစ်သည်။ သူ့ဘဝအစောပိုင်းတွင် ပညာတတ်သော်လည်း ဘုရားသခင်ကို မယုံကြည်သည့် ဒိဋ္ဌိတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သူ၏ ယုံကြည်ခြင်း သမိုင်းမှာ အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်း၏။ ထို့အပြင် သူ့ကို ဘာသာပြောင်းသူများနှင့် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံနေရသူတို့၏ အားကိုးရသော ရဟန္တာတစ်ပါးအဖြစ်လည်း လူသိများသည်။ အာဗန်ငယ်စဥ်က ရောမမြို့သို့ သွားလည်ပတ်ပြီး ရိုမများထံမှ ပညာမျိုးစုံကို သင်ယူခဲ့သည်။ သူသည် အလွန် ဖော်ရွေကာ ဆက်ဆံရေးကောင်းသူဖြစ်သောကြောင့် သူ့ကိုယုံကြည်၊ ချစ်ခင်သူပေါများခဲ့သည်။ သူ၌ရှိသည့် ငွေများကိုလည်း ဆင်းရဲသူများကို ရက်ရောစွာ မျှဝေပေးတတ်သည်။
ထိုအချိိန်၌ ရိုမဧကရာဇ်က သူ၏စစ်သားများကို ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့ စေလွှတ်ပြီး ခရစ်ယာန်များအား ညှဥ်းပန်းနှိပ်စက်၊ သတ်ဖြတ်စေခဲ့သည်။ တစ်နေ့တွင် ထွက်ပြေးနေသည့် အသက်ကြီးသည့် ဘုန်းတော်ကြီး အမ်ဖီဗာလူးစ် (Fr. Amphibalus) သူအိမ်သို့ သွားပြီး "အိုမိတ်ဆွေ၊ စစ်သားတွေက ကျွန်ုပ်ကို သတ်ဖို့လိုက်ရှာနေကြလို့ ကျွန်တော်ကို မင်းအိမ်မှာ ဝှက်ပြီးကယ်ရင် ဘုရားသခင် မင်းကို ဆုလာဘ်တွေ ပေးမှာ ဖြစ်တယ်" ဟု ခိုလှုံခွင့်တောင်းခဲ့သည်။ ထိုအခါ အာဗန်က "ခင်ဗျားမှာ ဘာအပြစ်လုပ်မိလို့လဲ" မေးသောအခါ ဘုန်းတော်ကြီးက "ကျွန်တော်ဘာအပြစ်မှ မလုပ်ခဲ့ပါဘူး၊ ခရစ်ယာန်ဖြစ်လို့ သတ်ဖို့ ရှာနေကြတာပါ။" ဟု ရှင်းပြခဲ့သည်။ "ဒါဆိုရင် ဘာမှ ကြောက်စရာမလိုဘူး၊ ကျွန်တော်လည်း ခရစ်ယာန်​တွေနဲ့ သိပါတယ်။ သူတို့က လူကောင်းတွေပါ။" ဟုဆိုကာ အာဗန်အိမ်၌ ဘုန်းတော်ကြီးကို လက်ခံခဲ့သည်။ ဘုန်းတော်ကြီးထံမှ သခင်ယေဇူးအကြောင်းနှင့် ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ချက်များကို နေ့စဥ် နားထောင်ခဲ့သည်။ အာဗန်သည် သခင်ခရစ်တော်က အသက်ပေးသည့်အထိ လူသားတို့ကို ချစ်သည့်အကြောင်းကို ကြားသောအခါ ထိုကဲ့သို့ ချစ်ခြင်းမျိုး၌သာ နေလိုကြောင်း ပြောဆိုကာ ယုံကြည်ခြင်း ရလာခဲ့လေသည်။
တစ်နေ့တွင် မမျော်လင့်ဘဲ စစ်သားများ အာဗန်အိမ်တံခါးဝသို့ ရောက်လာကြပြီး ဘုန်းတော်ကြီးကို ထုတ်ပေးရန် အမိန့်ပေးခဲ့ကြသည်။ ထိုအချိန်တွင် ဘုန်းတော်ကြီးထံမှ ကောင်းချီမင်္ဂလာခံယူပြီး ဘုန်းတော်ကြီး၏ ဝတ်ရုံကိုတောင်းကာ လမ်းပြမည့် သူ့အစေခံတစ်ယောက်ဖြင့် တိတ်တဆိတ် ထွက်ပြေးစေခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဘုန်းတော်ကြီး၏ ဝတ်ရုံကို ဝတ်ဆင်ကာ အာဗန် အဖမ်းခံခဲ့ရသည်။ သူနှင့်အတူ နတ်ပူဇော်ခဲ့ကြသည့် စစ်ဗိုလ်က အာဗန်အား ဘုန်းတော်ကြီးကို ကူညီလွတ်မြောက်စေသည့်အတွက် နောင်တယူပြီး နတ်ဘုရားများကို ပူဇော်ရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ သူသည် နတ်ဘုရားများကို မကိုးကွယ်တော့ဘဲ အရာအားလုံးကို ဖန်ဆင်းတော်မူသော စစ်မှန်၍ အသက်ရှင်တော်မူသည့် ဘုရားကိုသာ ကိုးကွယ်ကြောင်း ပြန်ပြောဆိုခဲ့သည်။
အမျက်ဒေါသထွက်နေသည့် စစ်ဗိုလ်ကြီးက အာဗန်ကို မြို့အပြင်ဘက်တွင် ခေါင်းဖြတ်သတ်စေခဲ့သည်။ ထိုသတင်းကို မြို့သူမြို့သားများကြားသဖြင့် စုရုံးကာ အာဗန်ကို နောက်ဆုံးနူတ်ဆက်ရန် ရောက်လာကြသည်။ သူကိုသတ်မည့် တောင်ကုန်သို့ ရောက်သောအခါ အာဗန်ကို သတ်မည့် စစ်သားသည်လည်း လူအများ၏ ကြည်ညှိနူတ်ဆက်မှုကြောင့် အာဗန်မှာ သန့်ရှင်းသူဖြစ်၍ မသတ်နိုင်ကြောင်းပြောကာ စိတ်ပြောင်းသွားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် အာဗန်ကို ခေါင်းဖြတ်သတ်ပြီးနောက် သူ့ကိုကွပ်မျက်ရန် ငြင်းဆိုသည့် စစ်သားလည်း ထိုနေရာ၌ပင်ခေါင်းဖြတ်သတ်ခံခဲ့ရသည်။
အာဗန်ကို ခေါင်းဖြတ်သတ်ခဲ့သည့်နေရာတွင် စမ်းရေရှိပြီး ထိုစမ်းရေသည် လူအများ၏ ရောဂါများကို ပျောက်စေသည်ဟု ဆိုကြ၏။ ထိုကြောင့် ထိုနေရာတွင် စိန့် အာဗန် ကာသီဒြယ်ဘုရားကျောင်းတော်ကြီးကို တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ထိုစမ်းရေမှာ ယနေ့တိုင်တည်ရှိသည်ဟု ဆိုကြသည်။ အာဗန်ကိုကြည်ညှိသည့်အနေဖြင့် ထိုကျောင်းတော်ကြီးကို စိန့်အာဗန် ဘုရားကျောင်းဟု နာမည်မှည့်ခဲ့ကြသည်။ (စိန့်အာဗန်ပွဲနေ့ကို Catholic News Agency တွင် ဇွန်လ (၂၀)အဖြစ်ဖော်ပြသော်လည်း တချို့ဆောင်ပါးများ၌ ဇွန်လ ၂၂ရက်နေ့ဟုဖော်ပြကြသည်။)
Ref: An Island Story: A History of England for Boy and Girl (By Henrietta Elizabeth Marshall, 1876-). Photo Crd: Google Image
ဇွန်လ (၃၀) သန့်ရှင်းသောပထမဓမ္မအာဇာနည်များနေ့
July (1) စိန့်ဂျိုနီပယ်ရိုစဲရာ ပွဲနေ့ (St. Junípero Serra)
ကရုဏာရှင်ယေဇူး၏ကတိတော်တေ ွနဲ့ကရုဏာရှင်ယေဇူးနှင့်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဒုတိယ မြောက်ဂျွန်ပေါလ်တို့ကြားကဆက်စပ်မှု